အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေပါ | အဆိုပါဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
အားလုံးမြို့ကြီးများသငျသညျအလုပျကိုရှာကူညီအလုပ်အကိုင်ရုံးများရှိ. သင့်ရဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးအေဂျင်စီကိုလည်းသင်သည်သင်၏ပထမဆုံးအလုပ်ရှာကူညီပေးပါမည်. သူတို့ပြီးသားသင်သည်သင်၏ပထမဆုံးအလုပ်ရှာတွေ့ကကူညီပေးခဲ့ပါလျှင်, သင်တစ်ဦးအလုပ်သစ်ရှာနေကြသည်သူတို့ကိုပြောပြနိုင်. သူတို့သည်နောက်တဖန်သင့်ကိုကူညီနိုင်မည်အကြောင်း.
ယနေ့တွင်, အများဆုံးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အအွန်လိုင်း posted နေကြတယ်. အလုပျအတှကျအွန်လိုင်းရှာဖွေနေ၏အားသာချက်သင်သည်သင်၏အလုပ်ရှာဖွေရေးနှင့်အတူသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. သငျသညျအလုပ်အကိုင်အတိအကျမျိုးများအတွက်သင်လိုချင်တာတစ်ခုအလုပ်အကိုင်များကိုအခွင့်အလမ်းများကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်. အလုပ်သုတေသန, တည်နေရာ, နှင့်သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းနာရီ. သင်တစ်ဦးကကွန်ပျူတာမရှိဘူးဆိုပါက, သငျသညျအလုပ်အကိုင်များရှာအခမဲ့အများပြည်သူစာကြည့်တိုက်မှာကွန်ပျူတာကိုသုံးနိုင်သည်.
အလုပျအတှကျအွန်လိုင်းရှာနေကွန်ပျူတာများ အသုံးပြု. အသစ်လူတို့အဘို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်. အဘယ်သူမျှမနေတဲ့ကွန်ပျူတာသုံးစွဲဖို့ဘယ်လို သိ. မွေးဖွားကြောင်းကိုသတိရပါ. လူတိုင်းလေ့လာသင်ယူခဲ့. သငျသညျသငျယူနိုငျပါတယျ, လွန်း. အလေ့အကျင့်နှင့်အတူ, သင်ပိုမိုအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်. စာကြည့်တိုက်, အများအပြားလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများတွင်ကျောင်းများနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်စင်တာများကိုဘယ်လိုသူတို့ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးအတွက်ကွန်ပျူတာများကိုသုံးစွဲဖို့လူတွေကိုသင်ပေးဖို့ညဦးယံအချိန်အတန်းရှိ. Search the RCO’s database FindHello app for classes in your town or city.
ဤအအလုပ်ရှာဖွေရေးဝက်ဘ်ဆိုက်များအားလုံးသင်သည်အလုပ်သတိပေးချက်တက်သည်လက်မှတ်ထိုးရန်အဘို့အ option ရှိသည်. သင်သည်သင်၏အီးမေးလိပ်စာရိုက်ထည့်လိုလျှင်, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအကျိုးစီးပွားသင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာရရှိနိုင်ဖြစ်လာတဲ့အခါသင် updates များကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်.
တကယ်ပါပဲ isagood website to search for job postings in your city. သင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာအသစ်သောအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေရန်သင့်မြို့ Enter.
Idealist isaဝက်ဘ်ဆိုက် has lots of nonprofit jobs. ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာတစ်ခါတစ်ရံသည်အခြားဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီလုပ်ဆောင်နေအလုပ်အကိုင်များရှာတှေ့နိုငျ, သငျသညျတစ်ခုထက် ပို. ဘာသာစကားပွောဆိုအထူးသဖြင့်လျှင်.
Monster lets you sign up for email updates listing new jobs. သင်တစ်ဦးအလုပ်ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, Monster ကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ကောင်းတစ်ဦးစိတ်ကူးက.
LinkedIn တို့ can be used onacomputer or on your phone to apply for jobs. သင်လိုချင်သောခေါင်းစဉ်ရှာရန်နှင့်သင့်အရည်အချင်းများကိုက်ညီသောမည်သည့်အနေအထားလျှောက်ထား.
သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးနှင့်အတူသင်ကူညီလိမ့်မည်ဟုတစ် LinkedIn တို့ပရိုဖိုင်းကိုအောင်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ
မှန်တံခါး lets you find the most recent job opportunities in your field of interest. သငျသညျလစာအဖြစ်အလားအလာအလုပ်ရှင်များ၏သုံးသပ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များလည်းရှာဖွေနိုင်သည်.
USjobs isawebsite where you can look for state government jobs. အလုပ်နိုင်ငံသားအဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်လျှင်ကြည့်ဖို့မလျှောက်ထားမီတိုင်းပို့စ်စစ်ဆေးရန်သေချာစေပါ.
USAjobs is for those who have US citizenship. This isagood resource for federal (အမေရိကန်အစိုးရ) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ. သငျသညျကိုဝင်ရောက်အပေါင်းတို့နှင့်ဖက်ဒရယ်အေဂျင်စီများအနေဖြင့်အလုပ်အကိုင်အတင်အဘို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်.
ZipRecruiter is another resource you can use onacomputer or on your phone. သင်တစ်ဦးပရိုဖိုင်းကိုဖြည့်စွက်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်, မူသောသင်တို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နောက်ခံနှင့်အကျိုးစီးပွားများပါဝင်သည်. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်လာတဲ့အခါသင် updates များကိုလက်ခံရရှိရန်ရှေးခယျြနိုငျ. ဒီလမ်း, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုသငျသညျကိုတိုက်ရိုက်လာ.
သော့ချက်စာလုံးများကိုရှာဖွေ, ကဲ့သို့ အနည်းဆုံး, ဖြစ်ရမည်, ရှိရမည်, နိုင်သူဖြစ်ရမည်, လိုအပ်, လိုအပ်သော, လိုအပ်, လိုအပ်ချက်များ, နှင့် အနည်းဆုံး. ဤသည်သောအရာကိုကျွမ်းကျင်မှုကိုရှာဖွေသင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်, အတွေ့အကြုံနှင့်ပညာရေးအလုပ်ရရန်လိုအပ်နေပါသည်.
သငျသညျအလုပျအတှကျအရည်အချင်းများ၏ကောင်းတစ်ဦးနားလည်မှုရှိသည်သောအလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်. သင်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီသင်အရည်အချင်းများရှိသေချာအောင်သင့်တယ်. သင်နားလည်ကြောင်းပြသခြင်းနှင့်ရာထူးများအတွက်အရည်အချင်းများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်လျှင်, သငျသညျအင်တာဗျူးရဖို့ကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းရှိသည်နှင့်အလုပ်မရကြလိမ့်မည်.